Gnome Shell, tsy dia ratsy loatra | Avy amin'ny Linux
Gnome Shell, tsy ratsy izany
pandev92 | | Fisehoana / personalization, GNU / Linux
Mbola tadidiko fa rehefa vao nivoaka ny Gnome SHELL dia ny kinova 3, foto-kevitra mahafinaritra, fampisehoana mahatsiravina, bika aman'endrika, tena ratsy tarehy. Tadidiko fa tamin'io fotoana io, Unity vao nivoaka ihany koa, izay ny mifanohitra amin'izay, ny endrika tsara tarehy, fa ny fampisehoana mampanaintaina, miaraka amin'ireo zavatra toa ny dock mihidy ary tsy azonao afenina intsony.
Toy izao, tapitra herintaona mahery aho, lasa mpisera KDE, hatramin'ny roa herinandro lasa izay. Avy eo dia nifanena tamin'i Sabayon aho, izay nahitako fandriampahalemana, saingy noho ny antony tsy fantatra dia niafara tamin'ny fisintomana ny GNOME ISO aho, angamba angamba noho ny fahasosorana efa nateraky ny fampiasana ny KDE.
Mazava fa i Gnome, dia niditra an-tsehatra ary angamba ireo meloka nandritra ny taona maro dia ireo ary ny fahasosorana nateraky ny tontolo iainana, mampatsiahy ahy ireo olona izay manohy mampiasa windows xp, satria tsy tian'izy ireo ny 7 sns.
Ny famokarana dia teny iray izay efa nampiasaina be loatra hanilihana ny GNOME 3, saingy io voambolana io dia tena subjectif, misy olona izay ny fluxbox no tontolo mamokatra indrindra, ny hafa kosa mihevitra azy ho KDE SC, ny hafa XFCE sns, izany no tsy eritreretiko hoe amin'ity tranga ity, azo lazaina fa ny GNOME SHELL dia tsy tontolo mamokatra.
Rehefa nandeha ny fotoana dia fantatro fa ny zava-drehetra dia olana amin'ny fanandramana zavatra vetivety ary lasa zatra azy ireo, izany no fomba, ohatra, ahafahako mahomby amin'ny fampiasana ny KDE SC, satria ny fampiasana boaty misokatra sy ny GNOME SHELL dia tsy misy ankanavaka.
Ny zavatra voalohany manohina ahy mandrakariva dia ny mahatsapa fa ny fisehoana tsy fampiasa an'ity DE ity dia nahazendana foana, ary koa tao amin'ny GNOME 2 "miboridana" izy io, fa tsy misy tsy azo amboarina amin'ny tsindry roa. Nosintomiko ny fonosan'ny kisary Faenza, ary ny lohahevitra Elegance ary voila.
Avy eo ny zava-tsarotra indrindra dia tonga, tamin'ny herinandro lasa, tsy maintsy nanao asa fikarohana momba ny varotra aho, nisokatra ny varavarankely 4, ny iray ho an'ny pdf, ny iray ho an'ny Mpanoratra, ny iray hafa ho an'ny mpitety tranonkala ary ny iray hafa ho an'ny pdf iray hafa, korontana avokoa ny zava-drehetra, Lasa adala ho ahy ny fanovana windows, ary ny asa azoko atao ao anatin'ny roa ora dia naharitra 3 aho, saingy roa andro taty aoriana dia nanao asa hafa indray aho ary tsapako fa lasa zatra ny tontolo iainana aho, ary mihamaro hatrany haingana sy mamokatra miaraka aminy.
Avy eo, notsapaiko tsara ireo mpamily nvidia, araka ny ho hitanao eo amin'ny pikantsary, nametraka tamin'ny Playonlinux, Call of Duty Modern Warfare 3, Diablo 3 ary Assasins Creeds aho, gaga tanteraka tamin'ny fitondran-tenan'ny tontolo iainana, nosedraiko ny fanovana ny famahana ny lalao ary hitako ny fotoana nandaozako ilay lalao fa ny tontolo iainana dia mbola tao anatin'ny fanapaha-kevitra naterak'izy ireo, izay tao amin'ny KDE SC of Chakra raha nitranga izany, fa ny biraon'ny laharam-pahamehana, dia refesina ho kely dia kely, toy ny famatrarana.
Nataoko andrana ilay flash mba hahitana raha nandriatra izy io, ary tsy nisy tonga lafatra, noho izany dia tiako ny asa ataon'ny GNOME amin'i Mutter, na dia tsy manana vatomamy maso toa an'i Compiz na KWin aza ity mpamoron-kira ity, izay mandeha tsara. (raha mbola tsy mampiasa amd ianao)).
Nanjary marin-toerana ny tontolo iainana, raha oharina amin'ny fotoana farany nanandramako azy, ny fotoan'ny GNOME 3.2, tsy mbola nisy lozam-pifamoivoizana hatramin'ny nametrahako azy, notsorina ny zava-drehetra, saingy he, miaraka amin'ny fitaovana fanovana GNOME, misy zavatra toy ny bokotra manidy minimize sns, izay azo averina, ary misy zavatra maro azo ovaina mora foana. Mora ihany koa ny manova lohahevitra, avelao ao an-trano fotsiny, .tema ary dia izay.
Ny fahamoram-pitadiavana fanitarana dia nahaliana ahy koa, ohatra, mampiasa ny fanitarana ho an'ny Mpris 2, izay ahafahako mifehy saika ny mpilalao rehetra, avy amin'ny menio audio.
Betsaka aminareo no hanontany tena hoe, maninona izany rehetra izany ..., ary ny valiny dia tsotra, hitako ny fanehoan-kevitra ratsy maro momba ny GNOME SHELL, ary samy afaka manana ny heviny ny tsirairay, ho very fotsiny izany bebe kokoa, nefa koa manontany tena aho, raha ireo notsapaina, efa mihoatra ny herinandro niaraka tamin'izy ireo izy ireo.
Azoko lazaina fa ny GNOME SHELL, dia tsy ratsy toa ny manandrana mino, ary manantena ny 3.8 aho, miditra ao amin'ny trano famakiam-bola Sabayon. Amin'ny faharesen-dahatra rehetra dia afaka milaza aho fa tsy misy tontolo iainana ratsy, na tsy mahavokatra firy amin'ny Linux, satria miankina aminao ny famokarana sy ny fampifanarahananao amin'izany tontolo izany, Unity, KDE SC, Gnome SHELL, XFCE, LXDE, WM, daholo tontolo iainana tsara izy ireo, miankina aminao ny zava-drehetra.
Noho izany, mangataka mihoatra ny iray aho izay afaka, maniry ary manam-potoana, mba hanome tsiro iray kokoa an'ity tontolo ity, saingy mazava tsara amin'ny distro izay hikarakara azy tsara kokoa, toy ny Opensuse, Fedora na Sabayon.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Gnome Shell, tsy ratsy izany
104 hevitra, avelao ny anao
Manaiky an'ity lahatsoratra ity aho, tiako tsara satria tsy mitovy amin'ny zavatra nampiasainay nandritra ny taona maro, ary miaraka amina fanovana vitsivitsy dia lasa tontolo kanto izy io. Na dia hilaza ny marina aza dia tiako kokoa ny 3.4 mihoatra ny 3.6, dia hiezaka ny 3.8 aho avy eo. mahafaly
Ny sary ratsy indrindra hatramin'izay. Avoahy ny hevitra mety hanananao, na inona na inona.
19 taona ilay zazavavy, aiza ny olana? (Ary 20 taona aho)
Tsy misy ifandraisany amin'ny taonan'ny tovovavy.
Tsy mampihoron-koditra ny WP. 😀
AHhh okay, zavatra hafa io xD
Nisafidy ny handray azy aho tamin'ny 2011 ary mbola miaraka aminy aho.
Ekeko fa hafahafa ny fikirakirany tamin'ny voalohany fa androany, rehefa tsy maintsy mampiasa Gnome2 aho dia hitako fa toa taloha be io ary tsy mahazo aina tahaka ny tontolo "vaovao" misy ahy.
Heveriko fa raharaha iray amin'ny filan'ny tena manokana sy / na ny safidinao ary ny fanekena hiatrika ny «borosinay».
Ny tena marina, rahateo, resaka tsiro sy fahalalana ny fomba hampifanarahana azy daholo izany
astolfo dia hoy izy:
"Saingy mandritra izany fotoana izany manontany tena aho hoe ireo izay nanandrana izany dia efa niaraka taminy nandritra ny herinandro mahery."
Tsia mazava ho azy. Hizaha toetra tsara alohan'ny hitsikerana azy ireo? Ha, adala ianao, eto ny olona manandrana azy mandritra ny adiny roa farafaharatsiny ary ale, hitsikera.
Mamaly amin'ny astolfo
mpanao hatsikana dia hoy izy:
Hitako fa tsy fantatrao ny drafitry ny fitsapana, izay kasainao handaminana vondron'asa hatao sy ny valiny izay antenainao ho azo.
Valiny amin'i Clown
Izaho dia mpampiasa gnome3 hatramin'ny nizahana ny fitsapana ny debian ary ny marina dia tsy afaka mitaraina aho anio, na dia sarotra tamiko aza ny nifanaraka tamin'ny ankamaroan'ny menio, niaraka tamin'ny sary famantarana goavambe.
Amin'ny ambaratonga hatsarana dia toa tsara amiko, ny fampisehoana sary dia tena tsara ary koa ny fihinanana ondrilahy dia tsy miharatsy raha jerena fa birao iray izay mampiasa effet graphique, toa ny mangarahara, aloka sns (613MB misy iceweasel misokatra ). Ankoatr'izay, miaraka amin'ny fanitarana, ny lesoka maromaro amin'ny safidy fanamboarana dia azo omena.
Heveriko fa ny tena olana amin'ny gnome dia eo amin'ny antonony sy maharitra noho ny politikan'ny mpamorona miaraka amin'ny olan'ny fampifanarahana aoriana ny gtk3 sy ny tsy fahampian'ny fampahalalana feno (boky torolàlana sns), izay hahatonga ny mpamorona maro hifindra toerana na hamorona ny programa ao qt izay ho ela na ho haingana dia hiafara amin'ny fanaovana gnome tsy dia misy ifandraisany.
Manantena aho fa ireto olona GNOME ireto dia hahatsapa fa ity politika ity dia tsy hitondra azy ireo hahavokatra ary hamoaka izany fieboeboana izay mampiavaka azy ireo hanomboka mihaino izay tadiavin'ny mpampiasa sy ny mpamorona, na dia tsy hitanao izay hitrangan'izany. ny eo noho eo. : /
Notsapaiko ihany koa nandritra ny fotoana kelikely tany Fedora (16 sy 17) ary tiako ilay izy, miaraka amin'ny fanitarana, fanovana sary masina sy lohahevitra, fanovana indraindray ary izay ihany. Tsy mahazo aina ny mampiasa raha zatra azy io, na dia misy aza mipetraka haingana kokoa noho ny hafa. Na dia nifindra tany amin'ny KDE aza aho dia nanetsika ny totozy hatrany amin'ny zorony mba hahitako ireo rindranasa.
haha izany no mitranga amiko rehefa mandresy aho, isaky ny manadino matetika aho ary mitondra ny pointer mankany amin'ny zoro ambony hanokatra ny menio xdddd
Juan David dia hoy izy:
Efa misy telolahy isika, io fiasa io ve dia mampihetsi-po tokoa (?), Io angamba no antony lehibe indrindra itiavako azy io noho ny Unity sy ny hafa.
Valiny tamin'i Juan David
Gizanina dia hoy izy:
Nampiasako azy io hatramin'ny andiany 3.0 tao amin'ny Fedora ary hitako fa haingana sy mamokatra tokoa izy io. Ny mazava dia ny ilainao dia sary masina vaovao satria mahatsiravina ireo entin'ny kileman-toetra, saingy hey, olana estetika izany, tsy misy fiatraikany amin'ny zava-bita.
Valio ho an'ny guizans
Tesla dia hoy izy:
Voalohany indrindra, arahabaina amin'ny lahatsoratra pandev92!
Ao amin'ny Gnome 3, efa nampiasaiko nandritra ny antsasaky ny taona teo ho eo. Hatramin'ny nametrahako default an'i Debian tamin'ny fararanon'ny 2011, mandra-panovako azy ho KDE tamin'ny lohataona 2012, ary tokony holazaiko fa tsy niasa tsara ho ahy izany. Na eo aza izany dia tsy tiako loatra, ka azoko tsara ny hevitra, hatrany amin'ny adihevitra, manohitra ny Gnome 3, satria fiovana lehibe eo amin'ny sehatry ny birao io. Araka ny asongadinao ao amin'ilay lahatsoratra dia heveriko fa misy tontolo iainana mahomby kokoa.
Avelako ny olan'ny famakiam-boky, ny fifanarahana aoriana, sns amin'ny siansa informatika, avelako ny hevitro momba ny antony namelako ny Gnome 3 ho tombontsoa, ​​ny voalohany an'ny KDE, ary avy eo ny XFCE (izay kasaiko hotohizana mandritra ny fotoana lava be mba hitovizany indrindra mankany Gnome 2 amin'izao fotoana izao):
Amin'ny androko isan'andro, mila miatrika emacs aho hanoratako zavatra amin'ny LaTeX, gnuplot, mpijery pdf, takelaka sasany, Mathematica, sns. Raha ny mahazatra dia manana birao roa aho amin'izany rehetra izany, amin'ny iray dia manao kajy aho ary amin'ny iray hafa manoratra antontan-taratasy. Noho izany, rehefa avy nanao izany tamin'ny Gnome 3 aho dia afaka manamafy fa izay vidin'ny XFCE amiko dia fotoana X, ao amin'ny Gnome 3 dia lafo amiko roa heny izany. Angamba noho ny interface na noho ny tsy fahampian'ny fahazarana io dia tsy haiko. Na izany aza, ny zavatra mitovy amiko dia nanjo ahy tamin'ny Mac tamin'ny 2010. Tsy nahazo aina tamin'io aho ary ny asa tsotra toy ny fanovana rakitra misy data dia mitaky vola bebe kokoa amiko.
Izany no zavatra niainako manokana. Nampiasa ny Gnome 3 aho, ary, ho an'ny filako, tsy soso-kevitra mihitsy izany. Na izany aza, ekeko fa ho an'ny mpampiasa an-trano izay afaka mampiasa ny PC-n'ny automatique ho an'ny birao, ny fizahana sns Safidy tena tsara ny Gnome 3.
Ho famaranana, heveriko fa ny vondrom-piarahamonina GNU / Linux dia tokony hatsahatra ny fanaovana adaladala sy ady. Mazava ho azy fa samy manana ny tiany ny olona tsirairay, ary izay toa tsy mahomby amiko amin'ny iray hafa dia mety toa ilay latabatra ahafahany manatanteraka mora kokoa ny asany.
Ary farany ary toy ny ohatra, mieritreritra aho fa na dia maro amintsika aza no tsy mankasitraka ny làlan-kaleha izay alehan'i Canonical amin'ny Ubuntu, dia tsy tokony hadinontsika fa maro ireo mpampiasa izay mampiasa Linux voalohany no manao an'io fizarana io ary ankehitriny dia mameno ny vondrom-piarahamonina izy ireo distro hafa. Toy ny raharaha amiko.
Miala tsiny amin'ny biriky! Fiarahabana!
Mamaly an'i Tesla
Birao tsara izany, saingy tsy afaka mitazona ny saiko mora foana aho ary misaotra an'i Arch sy Fluxbox fa tsy dia manana zavatra manelingelina be loatra aho.
Openbox no tiako nolazaina
Somarropellejo dia hoy izy:
«... fa tsy misy tontolo iainana ratsy, na tsy mahavokatra firy amin'ny Linux, satria miankina aminao ny famokarana ary ny fampifanarahana an'io tontolo io, Unity, KDE SC, Gnome SHELL, XFCE, LXDE, WM, tontolo iainana tsara daholo, rehetra ho anao ."
Marina tokoa fa ny zavatra rehetra dia miankina amin'ny fampifanarahana ny tsirairay. Mbola manana fomba i Gnome Shell, tadidio ny kde 4 tamin'ny nanombohany nanakianana be azy, tena tsy milamina, sns. Nefa hitanao fa lasa tontolo milamina io. Gnome Shell miaraka amin'ny «fitaovana tweak» azonao omena azy manokana, mamela tontolo misy fikitihana minimalista sy fampiasa miaraka amin'izay. Ny somary nanondro dia ny tsy fiovan'ny kinova ankehitriny sy ny teo aloha, andao tadidio ny korontana rehetra niforona tamin'i Cinnarch sy Manjaro noho ny tsy nanohizany tamin'ny kanelina ...
Dimampolo amby zato tiako ny Gnome Shell dia manana "Tsy fantatro izany ..." Izay tiako, ary ireo izay mbola misalasala ny sahy sy manome vintana faharoa. Hametraka ny Ubuntu Gnome 13.04 vaovao aho (amin'izao fotoana izao dia manana ubuntu remix 12.10) aho fa ity birao ity dia efa tonga miaraka amin'ity "tsiro" ity.
Fanontaniana iray azonao atao ny manatsara ny Gnome-Shell 3.8 amin'ny Fedora 18?
Valiny tamin'i Somarropellejo
"Fanontaniana iray, azonao atao ve ny manatsara ny Gnome-Shell 3.8 amin'ny Fedora 18?" Tsia, tsy azonao atao izany, mila miandry F-19 ianao.
Ankh dia hoy izy:
Azonao atao ny manangona azy amin'ny jhilder; na dia amin'ny fotoana hifaranany aza dia havoaka ny Fedora 19 XD. Tsy izany, tsy nanangona gnome mihitsy aho tany ivelan'ny gentoo, ka tsy azoko lazaina raha manome olana be izany. Raha ny tokony ho izy dia hangataka aminao gtk 3.8 izy io, ary mety hanapotika ireo rindrambaiko natambatra tamin'ny gtk 3.6, noho izany dia mila mamerina azy ireo ianao hametraka rohy mavitrika, ary avy eo hiampita ny rantsan-tànanao satria tsy misy ny tsy fitoviana.
Mamaly an'i Ankh
Raha ny tenin'ny olona Fedora tamiko dia mahamenatra ny fanaovana azy ary mivadika hatrany hatrany izany.
«Mety ho olana ny manangona sy mametraka azy. Azo inoana fa tamin'ny fotoana nahavitan'ny fametrahana azy ireo dia hanana teboka famotsorana hafa izy ireo "hoy ny navalin'izy ireo.
Maneho hevitra izy ireo fa ao amin'ny OpenSuse 12.3 azonao atao izany.
Hello, Juan Carlos.
tamin'ny farany dia nandia an'i Fedora Gnome nankany amin'ny Fedora KDE aho. Mijaly isaky ny mandona na mihintsana ny hatsiaka. Ao amin'ny Fedora KDE dia faly aho ary miasa miaraka amin'ny Kubuntu 12.04.2 LTS izay mandeha tsara 🙂
Rehefa nanandrana ny Fedora gnome aho dia tsy nahavita tsara loatra.
Salama Izaho miandry ny Centos 7… .hehe. Miezaka ny manasitrana ny tenako amin'ny versionitis Fedorian aho, ary ankehitriny, toy ny mahazatra, hitako fa ny% & $ # »Lenovo dia mifanaraka tsara amin'ny Windows noho ny Linux.
Inona no fitaovana anananao? Ratsy ho an'ny pc ny Versionitis amin'ny resaka fampisehoana indraindray.
@ pandev92: G470, Intel B940, Intel HD3000 Graphics izany. ´Ny distro roa izay mandeha tsara indrindra ao aminy dia ny Fedora sy OpenSuse, ilay voalohany tsara kokoa. Ubuntu 12.04, izay safidiko ho an'ny LTS, dia mampangatsiaka ny rafitrao noho ny olana Sandy Bridge sy ny kernel izay tsy manohana azy.
Toy izany koa, tsy ny ekipa akory, fa ny tokony hiarahako miasa. Ho hitako rehefa afaka mifanakalo peripheraly vitsivitsy aho, toa ilay mpanonta epson efa simba ho HP iray. Na izany na tsy izany, ny Windows 7 -ko tsy piraty, mba azonao an-tsaina fa tsy handany vola $$$$ aho, tsy mpankafy loatra aho hanao an'izany, ary koa, araka ny nolazaiko, tena mandeha tsara amin'ity solosaina finday ity .
Eny, ny intel hd3000, ny marina dia tena ratsy ..., ara-dalàna ny fanaovana tsaratsara kokoa ny windows, ny mpamily dia voatsara kokoa, ny intel dia manomboka tsara avy amin'ny 4000 raha ny hevitro, ankoatr'izay ny windows dia mitaky herin'ny sary kely kokoa ...
Nampiasako izany nandritra ny 6 volana ary nahazo aina aho tamin'ny voalohany, saingy noho ny antony sasany dia nanomboka nanova ny birao aho tamin'ny volana lasa ary tsy naharesy lahatra ahy intsony izany ary tamin'ny zavatra novakiako teo dia tsy izaho irery no nisy zavatra nitranga Izany.
Afaka volana vitsivitsy dia miandry ny hevitrao momba ny gnome indray aho 😛
ho hitantsika ny XD, antenaiko fa efa nandao ny lampanan'ilay distroshop xd aho
maro amin'ireo fitarainana izay avy amin'ny G3, farafaharatsiny mba ho ahy, dia ny fahasarotan'ny fanaingoana azy amin'ny resaka lohahevitra vs KDE. Ary ny momba ny fanitarana ananan'izy ireo ao amin'ny G3 dia marina, io no mora apetraka sy ampiasaina indrindra fa tiako ny manova lohahevitra ao amin'ny G3 toy ny manova akanjo mora, milamina ary haingana.
Raha ny amiko dia nanandrana ny G1 aho nandritra ny 3 volana teo ho eo fa tsy fantatro ny fomba hampifanarahana tsara satria ampitahako hatrany amin'ireo fotodrafitrasa amin'ny zavatra hafa ananan'i KDE ary tsapako fa mahomby kokoa.
Ny G3 dia mety ho tsara sy mahavokatra ho an'ny sasany, saingy misy fiolahana adaptation lava kokoa noho ny tontolo hafa ary mety hahasosotra ankoatran'ny zava-misy isaky ny fanavaozana ny G3 ny fanitarana amin'ny tranga maro dia mijanona tsy miasa intsony satria tsy mifanaraka intsony. ary mila miandry ela ianao vao voavaha izy ireo.
Tsy mitsikera ny tontolo iainana aho fa kosa sarotra kokoa amiko ny mitazona izany hatrany rehefa tokony hanavao ianao na zavatra mitovy amin'izany
Na izany aza tiako ny fijerin'ny rindranasan'ny GTK eo amin'ny tontolon'izy ireo hahaha amin'izany raha mankasitraka G3 aho izay tsy misy zavatra tokony hialona ny fisehoan'ny QT 😛
Hoy aho hehehe
Angamba ilay zazavavy ao aorianao dia tsy manana tsiky tsara indrindra, fa iza kosa, amin'ny sary faharoa dia tsara tarehy izy ireo.
tomoe yamanaka ehhee :), sampy japoney xd
hug0 dia hoy izy:
Resaka tsiro io, nanandrana nampiasa azy aho ary afaka nahazo ny andro fahafolo fotsiny dia tsy afaka intsony haha.
Tiako kokoa ny tontolo iainana mahazatra toa ny MATE na Xfce.
Valiny amin'ny hug0
Ahoana ny pandev92.
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho, ny DE na WM amin'ny Linux / Unix dia samy hafa ary samy hafa ny fomba fiasa ary izany dia iray amin'ireo hatsaram-panahy amin'ny tontolo Linux sy Unix. Araka ny nolazain'izy ireo tany, ny tsiro dia mizara karazany ary heveriko fa ny milaza na tsara na ratsy dia mitovy amin'ny baroque toy ny ady hevitra izay tonga voalohany, ny akoho na ny atody.
Ao amin'ny birao misy ahy dia manana Arch miaraka XFCE aho, ao amin'ny HP Mini 110 Arch Netbook miaraka amin'i GNOME Shell, Acer iray hafa miaraka amin'i Ubuntu LTS ary gadget iray miaraka amin'i Arch miaraka amin'ny OpenBox. Ny marina dia mahazo aina aho amin'izy rehetra, fa ny GNOME no tiako indrindra (resaka tsiro fa tsy zavatra hafa).
P.S. Mampiasa ny solosaina findaiko ankehitriny miaraka amin'ny Windows 8 aho noho ny antony fiantohana sy ny fiainana bateria. Mikasa ny hanova azy aho fa tsy hataoko izany raha tsy mahita fikirakirana tsara izay tsy manimba ahy na hanafohezana ny fiainana bateria ary izany amin'ny Linux na dia azo atao aza, raha toa ka mampiala voly. Raha ny marina amin'ny Windows dia maharitra 5 ora ary amin'ny Linux 2 ihany ary ny marina dia be ny fahasamihafana.
[YaoMing] Izaho izay napetranao Nana Mizuki ho valisoa [/ YaoMing].
Na izany na tsy izany, ny vazivazy dia fahazarana ary ho an'ny tanjona maharitra ananan'i GNOME 3, satria raha tsy manaiky ianao (ary kely kokoa amin'ilay sary an-tsary) dia afaka misafidy XFCE sy / na LXDE (indrindra indrindra, ho an'ny windowsers).
Amin'izao fotoana izao dia miandry aho mandra-panavaozan'ny Debian Stable hahafahako mametraka ao ny MATE sy / na ny LXDE (ny fanao, ny fanao etsy sy eroa).
Lupe kely ?. Ie ... mihamangatsiaka ny Gnome Shell.
Fantatrao ve izy: O?
Emether dia hoy izy:
Nisy zavatra nitovizany tamin'ny sasany tamin'izy ireo. Tamin'ny fahatongavan'i Ubuntu 11.04 dia nahazo Gnome 3 aho, tsy afaka nampiasa azy io mihitsy noho ny fiasa vitsivitsy an'ny solosaina nananany. Vao haingana aho no nividy endri-javatra tsara kokoa ary nametraka an'i Debian ... uff, mora ho ahy ny nanova efijery, nitazona izay rehetra nilaiko tamin'ny tsindry vitsivitsy monja, tsy fantatro fa nahaliana ahy fotsiny izany. Ratsy be i Debian mihazakazaka 3.4 satria ny 3.8 dia toa be lavitra noho ny tsara.
Etsy andanin'izany, nieritreritra ny hanao lahatsoratra mitovy amin'izany aho, satria nandritra ny taona maro dia namaky ny loza sy ny faharatsian'ny Gnome Shell aho ary nifarana - ho ahy- ho zavatra lehibe.
Valiny tamin'i Emather
le_zurdo dia hoy izy:
Ho ahy ny olana dia tsy ny gnome-shell intsony, fa ny tsy fahampian'ny asa nautilus, olana iray izay mitondra ihany koa amin'ny ubuntu manaraka
Mamaly an'i le_zurdo
VulkHead dia hoy izy:
Tontolo iainana tsara izy io, fa raha vantany vao apetrakao ireo fanitarana fanatsarana dia miadana tsy ilaina izany.
Valio amin'i VulkHead
Ny olana dia tsy izany, fa toy ny zava-drehetra izy, maro ny fanitarana tsy nohamarinina, mitovy amin'ilay nitranga tamin'ny fanitarana firefox taloha.
guillermoz0009 dia hoy izy:
Tsy mizara izany zavatra niainako izany aho, tena miasa tsara ho ahy ny marina.
Mamaly an'i guillermoz0009
Tian'ny GNOME3 azy hatramin'ny voalohany aho, na dia toa ny GNOME rehetra aza, indrindra ny fampiharana azy, hitako foana fa mitanjaka izy io; koa ny kinova vaovao dia tsy azo ovaina. Ok, eo am-pivoarana matotra izy io, fa ny fanitarana izay niasa ho anao amin'ny kinova iray dia mijanona tsy mandeha amin'ny iray hafa, tsy misy fomba hifehezana tsara ny birao ary koa araka ny nolazaiko ny rindranasa GNOME
fomban-drazana dia tsy manana ny fampiasa amin'ny rindranasa KDE izy ireo.
Na izany aza, ny GNOME Shell dia manana hevitra tsara sasany izay nampidiriko tao amin'ny birao KDEko ho toy ny toerana mafana eo an-jorony, izay efa ampahany tamin'ny KDE nandritra ny fotoana ela.
Shell mbola maitso be, tsy maintsy omenao fotoana.
Alemaina dia hoy izy:
Manaiky aho fa resaka fanazaran-tena fotsiny ny mahatsapa ny maha-azo ampiharina azy. Afaka manana terminal, mpandika teny, hikaroka ao amin'ny google amin'ny fomba haingana be ianao. amin'ny alàlan'ny fanitarana.
Mamaly an'i Alemana
tsy afaka mampiasa compiz ergo ianao fa tsy liana aho; Ny compiz dia mbola tsy misy faharoa, mbola tsy nahita zavatra hanaloka azy aho
BishopWolf dia hoy izy:
tsara ianao dia tokony manandrana kde amin'ny vokany sary rehetra
Valiny amin'i BishopWolf
Tsy tiako ny akorandriaka Gnome tamin'ny voalohany rehefa nanandrana azy tao amin'ny Ubuntu aho, fa rehefa nampiasa ElementaryOS dia tiako ny fomba fikirakirana Gnome Shell.
Ny tsikera nataoko ihany dia ny "mila fanamorana ny fanahafana, toy ny tao amin'ny gnome2"
Araka ny voalazan'ilay lahatsoratra dia nanomboka nampiasa ny Gnome Shell hatramin'ny voalohany aho ary diso fanantenana tamin'ny fitoniana.
Saingy androany no birao tiako # 2 ankafizin'i Cairo Dock. (Ovako ny iray ary ny iray hafa mba tsy ho leo)
Ho ahy dia ny biraonao mahomby indrindra, ny hitsin-dàlana ny fitendry ary miasa haingana (mila mianatra azy ireo fotsiny ianao) ny desktops mavitrika dia zava-mahatalanjona izay tsy misy amin'ny tontolo hafa, fanitarana tena tsara, ilay hany "fa" ianao Napetrako ny tsy fisian'ny effets, fa ho an'ireo izay mampiasa ny solosainy hiasa fa tsy hidera ny vokarin'ny birao dia heveriko fa tontolo iainana tsara indrindra. XD.
Manaiky aho, raha efa zatra izany (ary fotoana fohy). hay tena azo ampiharina. indrindra rehefa ampiana extension. toy ny terminal dropdown, mandika lahatsoratra avy amin'ny shell, google avy amin'ny shell, mametraka apps avy amin'ny topy maso. mba hilazana vitsivitsy fotsiny. gnome nivadika ho tena azo ampiharina
Mazava ho azy, eny, tontolo iray izay apetraka ny zava-drehetra, ohatra hoe mila mampiasa mutter ho an'ny fika, Kde dia manana kwin fa mamela anao hampiasa ilay mpamorona tianao, izany no fahalalahana ary ny gnome dia manala azy rehetra. Toa bebe kokoa hatrany amin'ny macs sy mandresy izy io, ary asan'ny ellección ny Gnu / linux; farafaharatsiny mieritreritra an'izany aho
Misalasala aho fa misy olona adala manova kwin ho compiz ..., raha tsy hoe misy effets manokana dia tsy milamina kokoa ny compiz raha oharina amin'ny kwin xddd, ary raha ny marina, raha nisafidy ny hanery ny himonomonona izy ireo, dia satria tsy himonomonona fotsiny nahatanteraka izay nilain'izy ireo.
Tsy fantatro hoe aiza ny tsy fandriam-pahalemana compiz, mbola tsy nandalo an'io mihitsy aho. Ary ny zavatra misy azy ireo, ny compiz dia manana fampisehoana tsaratsara kokoa noho ny kwin, ity farany nampiasako ity ary mahavoa mihoatra noho ny fiaran'ny dadabenay, tsy misy fangarony izy io
Satria koa ny akorandriaka gnome dia tsy misy afa-tsy kopia tsy voafehy amin'ny fanaraha-maso ny iraka ary ny Mac launcpad dia mety namela azy tahaka izao, izany hoe, fampiharana iray hafa tsy hanafoanana ny tontolo iainana, raha tianao dia azonao ampiasaina izany ary raha tsy izany, tsia
Eny, mandehana fotsiny amin'ny google dia ho hitanao ny compiz tsy mitombina, :) indrindra ny 0.9
Araka ny voalazanao dia resaka tsiro sy / na fanao izany!
Nampiasa ny Gnome Shell ao amin'ny Fedora 18 sy Sabayon koa aho, saingy satria ny tsiriko manokana dia ny manana birao minimalist, misafidy ny LXDE, na Openbox aho.
"Misafotofoto daholo izany, lasa adala ho ahy ny fanovana windows"
Ary izany ihany no hany zavatra itsikeraiko miharihary ny Gnome Shell .. izany no mahatonga ahy amin'ny XFCE haingana kokoa noho ny mampiasa Gnome Shell aho
Milamina ny zava-drehetra, mahafinaritra ny tontolo iainana, na dia ao amin'ny XFCE aza aho, mametraka "gnome-terminal, gnome-system-monitor, eog, gedit, nautilus"
fasana dia hoy izy:
Ny Gnome 3 miaraka amin'ny akorany dia mitovy amin'ny fananana windows 8, izy ihany no minimalist kokoa.
Mamaly an'i hades
Andao jerena .. Akorany tena tsara, vola sy fako marobe .. Ok, saingy manontany tena aho hoe, rehefa avy eo amin'ny birao no mampiasa ny fitaovana GNOME. Ka ahoana? Gedit dia mbola mikorontana ihany, totem tsy lazaina intsony, eo amin'ny lala-mahitsy ny tranonkala noho ny webkit fa ndao, tsy ampy be .. Na izany na tsy izany.
Ralehilahy raha toa ka lasa toy izany isika, ny mpilalao dragona dia plasta xD izay tsy azonao atao ny misafidy dikanteny, konqueror dia mpizahatany ratsy, amarok mavesatra be sns sns, ary amin'ny farany dia mametraka smplayer, clementine, chrome sns xD ianao.
Mikorontana i Gedit? Tsy misy tonian-dahatsoratra hafa ao amin'ny gtk +, totem dia mikorontana? Mametraka gnome mplayer, tranonkala tsy dia tsara loatra? mametraka chrome, firefox, opera ...
rhythmbox dia sh ...? mametraka am-pitoniana xnoise, beatbox, sonata sns xDDD
Ny fampiharana ny tontolo iainana no kely indrindra, ny zavatra voalohany esoriko.
Izaho dia niresaka momba ny rindranasan'ilay tetikasa manokana, satria koa mametraka VLC, SMPlayer ... sns. Ary mijery anao, mbola manana birao tsara tarehy kokoa noho ny Gnome Shell aho ary kely ny laniny .. HAHAHA, fa araky ny lazainay eto: Zava-tsiro .. 😛
Edito: Ary rehefa miresaka momba an'i Nautilus isika, inona no ataonao? Inona no apetrakao?
nautilus? Tsy nanova azy mihitsy aho, tsy mila mpitety rakitra mihoatra ny iray, toy ny amin'ny feso, ny ataoko dia ny fisokafana rakitra ary indraindray mampiasa ny safidy fikarohana aho, tsy mila bebe kokoa.
Che totem dia tsara ary gedit dia tonian-dahatsoratra tena tsara, azonao atao ny mametraka plugins amin'ireo zavatra maro hafa
horonan-tsary hianarana gedit
Gnome Shell, tsy ratsy izany ... fa tsy XD tsara indrindra
Ny fisafidianana izay DE tianay hampiasaina dia tafiditra ao anaty ny lafin-javatra, ny hatsarana, ny fampiasana azy sns.
Fa ny famaritana hoe iza no tsara kokoa na ratsy kokoa (teny tsy mazava loatra), tsy maintsy dinihintsika ireo zavatra azontsika refesina antonony, toy ny fahaiza-manao FANJAKANA (hisy ireo miady hevitra momba an'io milaza fa tsy ny olon-drehetra no afaka manamboatra ny DE-mitovy, fa ny fanontaniana dia hoe na tsia ireo safidy, tsy tapaka raha hain'ny mpampiasa ny fampiasana azy ireo na tsia.)
MODULARITRA (Miaraha-miasa amin'ny fampisehoana izany).
FIFANDRAISANA (miaraka amin'ny maritrano hafa, ny tontolon'ny distros efa misy, DE hafa, DE mitovy amin'ny kinova taloha sy taty aoriana).
Ary satria eo amin'ny tontolon'ny FOSS isika, diniho ihany koa ny fandehanan'ny tetikasa amin'ireo vondron'olona mpampiasa sy mpamorona.
Azo antoka fa manadino zavatra maro kokoa aho, fa raha dinihina ireo ary mitady fifandanjana eo anelanelany, dia mino aho fa tsy misy isalasalana fa mandray ny satro-boninahitra i DE.
Raha aorian'ny fandinihana ireo zavatra ireo sy ho an'ny fahafinaretana fotsiny dia aleon'ny DE izay tsy "tsara indrindra" dia hajaina tanteraka ny fanapahan-kevitra, satria amin'ny tsiro fa tsy fanatisme tsy mitombina mifototra amin'ny doka, tsy fahalalana (ireo tombo-tsoa azo avy amin'ny safidy hafa ) na fomba fanao fotsiny.
Ny maha-feno sy azo amboarina indrindra indrindra dia tsy mahatonga azy io ho tsara indrindra, ny mac osx dia tsy ny azo ovaina indrindra, fa maro no aleony, satria manatanteraka izay ilain'ny olona, ​​fitoniana. fampisehoana sy vatomamy maso, zavatra hafa rehetra, dia zavatra ho an'ny mpampiasa herinaratra.
"Ny maha-feno sy namboarina indrindra dia tsy nahatonga azy ho tsara indrindra,"
Hoy aho: ny fahombiazana, ny fahamaotinana, ny mifanentana ary ny fifandraisana amin'ireo vondrom-piarahamonina, ary miaraka amin'izy ireo dia mitady fifandanjana. Tsy nanonona fotoana "feno" mihitsy aho tamin'ny fotoana rehetra
"Mac osx tsy azo ovaina indrindra, fa maro no aleony"
Mariho ny fetran'ny fanehoan-kevitro ao anatin'ny tontolon'ny FOSS, na dia toa maro aza no maniry zavatra iray tsy manatsara azy (raha toa ka kendrena isika ary mahita tranga ankapobeny sy tsy voafaritra).
“Satria mahafeno izay ilain'ny olona izany, fitoniana. fampisehoana sy vatomamy maso, »
Azavao fa ny fanontaniana sujet dia tsy mitombina amin'ny famaritana ny tombony ankapobeny an'ny DE, ary tsy mitovy amin'ny fisafidianana iray ho an'ny fampiasanao manokana. Amin'ny lafiny iray, olona aho ary i KDE dia manome ahy fahombiazana, fahamendrehana ary vatomamy maso (ary maro hafa).
Raha te hahafantatra isika raha amin'ny ankapobeny dia tsara kokoa noho ny Coca-Cola ny ranom-boasary voajanahary, dia mahita ny tombony ara-batana sy ara-toekarena ary lava sns. entin'izy ireo izahay ary mihevitra izahay fa tsara kokoa ny ranom-boankazo.
Angamba misy olona tsy mahazaka volomboasary, izay onenany dia tsy azony idirana, na tsy tiany ny tsirony, fa tranga manokana sy / na miorina amin'ny olana ara-kevitra izany, saingy mbola tsara kokoa ny ranony.
Raha aorian'ny fahafantarako an'io dia misy ireo izay aleony misotro Coca-Cola fa tsy ranom-boankazo (indraindray ataoko) ny fanapahan-kevitra dia hajaina, fa raha noho ny:
Mitanisa (go ego XD) «fanatisme tsy mitombina mifototra amin'ny dokam-barotra, ny tsy fahalalana (ny tombotsoan'ny safidy hafa) na ny fahazarana fotsiny.»
Mety ho fanapahan-kevitra mandefitra indrindra izany.
Mikaroha kely fotsiny amin'ny launchpad, ao amin'ny comptr 0.9 bugtracker, dia ho fantatrao. Ary miaraka amin'i nvidia dia manana bibikely mandritra ny volana maro izy ireo izay mahatonga ny varavarankely ho mainty indraindray.
XD Tsy tonga teto izany fanehoan-kevitra izany, sa tsy izany?
Ralehilahy raha tianao kokoa ny ranom-boasary noho ny coca cola, ao ianao xD, coca cola dia in-arivo heny xddd tsara kokoa, maharikoriko xD ny voasary ary asidra, mila ampiana siramamy antsasaky ny kilao XD ianao
hahaha, izany tokoa ireo fihetsika nolazaiko ireo, ho tsikaritrao imbetsaka izy ireo any amin'ireo fanboy an'ny distro sasany.
JL dia hoy izy:
Salama! Te hizara aminao aho fa ny zavatra niainako niaraka tamin'i Gnome-Shell dia POSITIFA BE. Ary izany rehetra izany ho an'ny fahafaha-manao tsotra atolotra azy. Fantatro fa tsy mazava ny tonga tampoka, fa ... ny tranonkalanao misy fanitarana! Zavatra mahafinaritra io. Nametraka fanitarana 12 aho ary manana birao VOAVOAASA be dia be aho ary mailamailaka rehefa miditra amin'ny toerana sy ny rindranasa. Rehefa voalaza fa tsy misy fanaingoana firy… zahao ireo fanitarana! Ho fanampin'izay dia baikoina amin'ny laza avo indrindra ka hatramin'ny farany ambany indrindra izy ireo.
Raha ny tena izy dia hitako fa PRACTIKA BE ... rehefa fantatra ireo "fikafika" ireo.
Valio amin'i JL
Hulk dia hoy izy:
Nampiasa ny gnome 3.6 aho nandritra ny telo herinandro teo ho eo amin'ny solosaina findramam-bola nomen'izy ireo ahy tany am-piasana ary tsy azoko natao ny namolavola azy: p
Afaka zatra ny fampiasana azy aho fa tsy naharesy lahatra ahy, ny tsy fisian'ny fanamboarana no teboka voalohany manohitra azy, tsy azonao ovaina mora foana ny zavatra toy ny toeran'ny bokotra akaiky, mampihena, sns eo ankavanan'ny varavarankely na ny zoro mafana toy ny amin'ny KDE.
Ary koa, ny olana lehibe hitako izay ilazako hoe mahomby kokoa amin'ny kde aho dia ny Dolphin. Tsy nahita mpikaroka rakitra ao amin'ny gnome izay manakaiky ny fampisehoana aho. Ohatra, ny sivana haingana amin'ny ctrl + 1, ny fikarohana atiny rakitra, ny efijery fisarahana, ny console haingana miaraka amin'ny f4, ny fampidirana azy amin'ny git, svn, ssh, sns ankoatry ny zavatra maro hafa.
Valiny tamin'i Carcaman
* Sivana haingana amin'ny sivana amin'ny ctrl + i
Raha ny marina dia nihatsara be izy io .. mazava ho azy fa tsy hampiasa DE feno aho .. fa raha miaiky aho fa manan-danja ny fandrosoana .. omeko azy io fahavetavetana antsoina hoe firaisan-kina ..
Toa tsy zavatra ratsy izany amiko, fa tsy lavitra ny hatsaran'ny kde.
Valiny tamin'i Federico
Juanra dia hoy izy:
Hatramin'ny nanombohako tao amin'ny GNU / Linux dia aleoko kokoa ny Gnome-GnomeShell, nampiasa ny Fedora 17 niaraka tamin'ny KDE aho nandritra ny volana vitsivitsy ary ny marina dia tiako izany saingy tsy eo amin'ilay birao izay tsy fantatro ny antony. Talohan'ny naha-olon-vao ahy ahy (mbola izaho nefa mbola kely noho ny teo aloha) dia tiako ny GnomeShell saingy nisy zavatra tsy ampy nananany hoe dock fa rehefa tsy mikasa ny hampiasa ilay dock intsony aho dia tsy hitako intsony hoe ilaina izany.
Valio i Juanra
dartre dia hoy izy:
Salama amin'ny lahatsoratrao!
Heveriko fa iray amin'ireo hevitra vitsy izay tsy fanatisme mivantana.
etsy ankilany ny gnome sy ny akorany tiako foana!
sarotra ny manamboatra azy fa azo atao, mila mahalala css kely fotsiny ianao ary zavatra hafa.
Ny hany zavatra tsy tiako momba ilay akorandriaka gnome dia ny fitarihana fisokafana rakitra avy eo amin'ny nautilus mankany am-baravarankely, saingy tsy misy azo vahana izay avy amin'ny Open….
mandritra ny sisa tiako ny akorany gnome ary mampifanaraka tsara azy aho
Heveriko fa safidy tsara io ary tena atolotra anao raha efa mankaleo ny DE klasika ianao.
Mamaly an'i dartre
Avy tany Gnome foana aho ary mieritreritra aho fa lasa ny fiovana ary ny dingana mampivadi-po indrindra. Natao ho minimalista izy io ary ho an'ny fampiasana extensions (miaraka amina vitsivitsy dia tsy afaka mitaraina intsony ianao hoe tsy mamokatra, ohatra, ao amin'ny Unity I cannot). Nandritra ny taona maro dia nifantoka tamin'ny zavatra toy ny compiz izahay. Saingy nahatsapa foana aho fa ireo zavatra ireo dia nanome endrika tsy matihanina na matotra an'i Linux. Azo atao ny mametraka azy rehetra, saingy hitanao ny pikantsary misy ny latabatr'ireo olona…. ary nisy vazivazy vitsivitsy. Ity no fahalalahan'ny Linux, saingy nisy vidiny ihany koa. Nampiasako izany fitaovana rehetra izany (mbola manana ny pikantsary mahatsiravina sasany an'ny Gnome 2 miaraka amin'ny Compiz na tutorial momba ny fomba hampandehanana azy io aho), fa mandraka androany, raha manaraka ny làlana voamarika i Gnome, dia tsy mikasa ny hanana ny toerako amin'ny birao hafa aho, amin'ny kely kokoa amin'ny solosainako lehibe. Ambonin'ny fiovana rehetra eo amin'ny sehatry ny fandaharana (GTK3 sy ny hafa) dia manasongadina ny ezaka fampiraisana aho izay manome tsikelikely an'i Gnome lafiny matotra sy matihanina kokoa. Miresaka momba ny rindranasao manokana miseho miandalana ianao ary rehefa mandeha ny fotoana dia hamonjy anao tsy maintsy mametraka hafa izay efa nampiasanao: Mozika, Sary, Kalandrie, famantaranandro, sns. Faly aho ary ny fikirakira ahy salantsalany dia: miniPC misy XFCE, ho an'ny fampidinana sy fahitalavitra, ny solosaina findainy ho solosaina lehibe miaraka amin'ny Gnome 3 Shell sy Smartphone / Tablet miaraka amin'ny Android / iOS na izay tonga… lavitra ny trano.
Andresito dia hoy izy:
Gnome 3 tsy dia ratsy loatra? … Ugh… Tsy dia namaky mpamaky kelikely fotsiny ianao.
Valiny tamin'i Andresito
Raha milaza ny hevitro aho dia ho very ny mpamaky, tongasoa izany fatiantoka 🙂
Iray kely kokoa noho izany ..
Mamaly an'i andresito
Enga anie ny Hery hiaraka aminao.
Niaraka tamina akorandriaka nandritra ny volana vitsivitsy tao ubuntu aho fa niverina ho amin'ny firaisankina, tiako be ilay izy nefa tiako ny firaisankina
Mampiasa azy aho ary tiako be dia be, mahaliana ny fomba
mandroso ny tetikasa: D.
Mampiasa Uuntu-Gnome aho, saingy tsy mitovy amin'ny Sabayon ny sary.
Zavatra iray hafa ho an'ny mpitantana, ny sary eo amin'ny takelaka dia voaolana.
Efa nametraka gnome ao amin'ny mpandraharaha mpampiasa anao ve ianao?
Tsy nikasika ny mpandraharaha Chrome na Chromium na Safari aho. Nanova azy tamin'ny fotoana hafa aho, ho an'ny zavatra hafa. Mamela anao hanao izany i Chrome nefa tsy mila mametraka na inona na inona ... Fa tsy hitako izay tokony ampiana mba hisehoan'ny kisary Gnome.
Avy amin'ny iPad dia mandeha tsara izy io. Avy amin'ny Chromium dia mahazatra. Avy amin'i Chrome dia tsy mivoaka akory hoe mampiasa Ubuntu aho:
-iPad: safari + takelaka
-Chromium: chromium + ubuntu + sary tsy voafaritra
-Chrome: chrome + linux
Amin'ny chrome dia mila mampiasa ny extension extension ny agents agents ianao ary mitadiava lahatsoratra iray eto, izay miresaka momba ny fomba hanovanao azy.
Jereo ny fananako azy ary ataoko ny fanovana mety.
shnkr3 dia hoy izy:
azonao omena ahy ve ianao plss>.
Mamaly an'i shnkr3
Andao jerena, jereo:
Sampiko ianao !!! : D !!! Ny sampy japoney dia u-15? mahafatifaty tokoa ny sampy
18 taona xddd ity, fa raha tsy te tsy hahita ianao, google minisuka xD, na jappydoll sns xdddd, mahafatifaty daholo> //
Mariano O. dia hoy izy:
Nampiasako izany, homeko fotoana vaovao miaraka amin'ny 3.8.
Valiny tamin'i Mariano O.
Tsy fantatro fa tsy hitako hoe ratsy na ratsy, tsapako fa izany no ilain'ny olona sasany ary afaka mampiasa azy io, tiako izany fa rehefa mamorona zavatra ao anaty rindrambaiko mavesatra ny gnome-shell dia mandany loharano izay tsy azoko laniana ary nisafidy xfce aho, fa ny akorandriaka dia Na dia misafidy firaisankina xD aza aho dia tiako ny hitsin-dàlana voaravaka mialoha ary amin'ny kde tiako ny mikasika ny hakantony sy ny hetsika ao aminy fa ilay interface tsara izay tiako indrindra dia ny firaisankina na dia te hanana pc 4 aza aho miaraka amin'ny xfce, kde , akorandriaka sy firaisan-kina
4ZhaGratH dia hoy izy:
misy mahalala ny fomba fametrahana tsara akorandriaka 3.8 shell
Valiny amin'ny 4ZhaGratH
[IMG] http://i.imgur.com/Gt2Gm7q.jpg [/ IMG]
Ao amin'ny Ubuntu GNOME 13.04, napetraka ny Gnome 3.8 manampy ny PPA araka izay nohazavaina eto https://launchpad.net/~gnome3-team/+archive/gnome3
Nanapa-kevitra ny hametraka azy aho hahitako izay vaovao (hiseho tsikelikely izy ireo) ary satria ilay 3.6 izay miaraka amin'ny Ubuntu 13.04 dia tsy dia nandeha tsara tamiko…. Ny Gnome Shell dia niadana be. Ankehitriny dia mandeha tsara ny zava-drehetra ary miaraka amina fanitarana roa napetraky ny ekipa Gnome (ofisialy)…. ny birao malalako.
Gurren-Lagan dia hoy izy:
Eny, raha tsy dia ratsy loatra ny akorandriaka Gnome dia tsy ampy fanaingoana bebe kokoa fotsiny izany, tiako be 😀
Valiny tamin'i Gurren-Lagan
Fametrahana sy fananganana SAMBA amin'ny Ubuntu 12.04
Fifandraisana wifi tsotra ao amin'ny Arch linux